Posted on September 5, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)
အသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ..တစ်နေ့ကို 20 မိနစ်လောက်ဘဲအချိန်ပေးရတာပါ… ကျနော်စမ်းလုပ်နေတာ နှစ်ပတ်ဘဲရှိပါသေးတယ်.. ဒီလိုငွေရှာနည်းကိုသုံးမယ်ဆိုရင် မိမိရဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်းမှာဘဲ..မိမိရဲ့အကောင့်တစ်ခုတည်းသာဖွင့်သုံးပါ…အခြားသောအကောင့်တွေ
ဒီအင်တာနက်လိုင်းနဲ့သုံးတယ်ဆိုရင် ဒီအင်တာနက်လိုင်းနဲ့ဘဲ အသုံးပြုပါ…အထူးသဖြင့် ဒီလိုနည်းတွေက
ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်ရှိသူတွေအတွက် အရမ်းကိုအဆင်ပြေလွယ်ကူပါတယ်..ဖုန်းနဲ့လည်း လုပ်လို့၇ပါတယ်…ဒါကြောင့် အင်တာနက်မှာ တစ်နေ့ကို မိနစ် 20 လောက်ပဲအချိန်ပေးလိုက်ပါ..တကယ်
ဟုတ်ကဲ့… PayPal ကနေငွေထုတ်ပါ့မယ်..ဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုတော့ http://www.shwemoney.com မှာအသေး
ကျနော်ငွေတစ်ကယ်ထုတ်လို့ရခဲ့တဲ့ဆိုဒ်ကတော့ The Bux ဆိုတဲ့ဆိုဒ်ဘဲဖြစ်ပါတယ်ခင်မျာ…. ယုံယုံကြည်
နောက်ထပ် ပိုက်ဆံရှာတဲ့ နည်းကတော့ ကံစမ်းမဲ နှိုက်သလိုပါဘဲ အချိန်ရတဲ့ လူတွေ လုပ်ပါလို့ အကြံ ပေးချင်ပါတယ် ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကံစမ်းမဲ ပေါက်လွယ်လို့ပါ ။ ကျွန်တော်တောင် တော်တော် ပေါက်ပြီး သွားပြီ။ 😀
ဒီစာတန်းက မဲပေါက်တာပါ။ 😀 1000 နော် ပေါက်တာ …
အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်း ပိုက်ဆံ ဘယ်လို ထုတ်မလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြပါ့မယ် …
ဒီအပိုင်းမှာ ဖြည့်ရမှာက အရေးကြီးပါတယ်။ အမှန်အတိုင်း ဖြည့်ရမှာပါ။ Address မှာ ကြိုက်တာ ထည့်ပါ။ City/District မှာတော့ Phuket ရေးပါ။ Province မှာလဲ Phuket ကိုဘဲရွေးပေးပါ။ Postcode မှာတော့ 83000 လို့ ဖြည့်ပါ။ Phone number မှာကတော့ 08 နဲ့ စပြီးတော့ ဂဏန်းဆယ်လုံး ပြည့်အောင် ထည့်ပါ အမှန်အတိုင်း ရေးရင်တော့ ကောင်းပါတယ်။ 0874627593 ဒါကတော့ ကျွန်တော့် Phone No ပါ။ မိတ်ဆွေတို့ သုံးချင်တယ် ဆိုရင် သုံးနိုင်ပါတယ်။ သတိပေးချင်ပါတယ် မိန်းကလေးများ ဖုန်းမဆက်လာပါနဲ့ 🙂 ဟီး ..ဟီး ..စ တာပါ။
← အိမ်မက်ကျမ်း(For Android)
Facebook မှာ ကိုယ့် Timeline ကို ဘယ်သူမှ tag မရအောင်လုပ်နည်း →
18 thoughts on “အင်တာနက်မှာ မိနစ် 20 အချိန်ပေးပြီးငွေရှာနည်း နှင့် PayPal Account သစ်ဖောက်နည်း”
Ygn Hein says:
Sorry IP is already used by other member .. How i do? please.. !
Thet Htin Aung says:
အကိုရေ Image Varification က ဘယ်လိုမှ ရိုက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပါဦး။ဘယ်လိုပဲတူအောင်ရိုက်ရိုက် မရဘူး။ "Use only alphanumeric character (a-Z,0-9). Other possible characters:_, " ဆိုပြီးပေါ်နေတယ်၊လုပ်ပါဦး ။
The Bux မှာပါ
PayPal အကောင့်တော့ ရသွားပါပြီ၊ အဲဒီအတွက်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ
Hi Brother, I wish you to post for multiclicker and plugins for PTC sites in Myanmar Language.Thanks in advance.
spy lay says:
The Bux အကောင့်က ကျွန်တော်နည်းမျိုးစုံနဲ့ လုပ်ပြီးပြီ လုပ်လို့မရလို့ပါ ကျွန်တော်ဘဲ လုပ်တာမှားနေလို့လား ကျွန်တော်ကို အကောင့်တစ်ကောင့်လောက်ဖွင့်ပေးပါလား name spylay ပါ pass spy12345 (spylay0@gmail.com) ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
KaungMin Khant says:
Is Paypal only for 18 and above not under 18?
http://VisitsToMoney.com/index.php?refId=255408this is also finding money on online.